Madaxtooyada Iyo Gudoonka Baarlamaanka Oo La Sheegay In Ay Ka Shaqeenayaan Mudo Kororsi – Banaadir weyne
Muqdisho – Waxaa wali shaki xoogan laga muujinayaa in sanadka soo socda ay doorashadii horey loo qorsheeyay ay ka dhaceyso Soomaaliya, waxaana hadal heynta ugu badan noqotay in madaxda talada heysa doonayaan mudo kororsi.
Xildhibaan Maxamuud Beene Beene oo katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa afduub ku tilmaamay mudada bilka ah ee uu Gudoonka Baarlamaanka ugu daray Guddiga Doorashooyinka Qaranka.
Waxa uu sheegay Xildhibaanka in Go’aanka Gudoonka Baarlamaanka uu ahaa mid qorsheesan oo lagu jabiyay sharciga doorashada, waxa uuna xusay in gudoonka fuliyeen qorshe hoose oo horey loogu heshiiyay.
“Go’aanadi Shirki Labada Guddi Joogto, waxaa uu ahaa go’aano qorsheysan oo afduub ah, waliba qodobo sharciga doorashada ah ayaa la jabiyey. Guddoonka ayaa fushaday qorsho ay wateen horayna loogu soo heshiiyey”ayuu yiri Xildhibaan Beenne Beenne.
Xildhibaan Beene Beene ayaa sheegay in xubno katirsan Gudoonka Baarlamaanka Federaalka iyo Madaxtooyada kawada shaqeenayaan in mudo kororsi sameeyaan , waxa uuna tilmaamay in damacaasi ay si weyn uga soo horjeedaan.
Go’aanka mudada bilka loogu kordhiyay Guddiga Doorashada Qaranka ayaa waxaa walaac ka muujiyay qaar kamid ah Wakiilada Beesha Caalamka iyo sidoo kale Siyaasiyiinta Mucaaradka ku ah Dowlada. – All Banaadir News